FAQ Archives - induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziyisa mhinduro
Induction Wire uye Cable Heating
Induction waya uye tambo heater inoshandiswawo induction preheating, post heat kana annealing yesimbi yesimbi pamwe nekubatana / vulcanization yekuisa insulating kana kudzivirira mukati meakasiyana tambo zvigadzirwa. Preheating application inogona kusanganisira waya yekudziya isati yadhirowa pasi kana extruding. Kupisa kwekutumira kwaizowanzobatanidza maitiro akadai sekubatanidza, vulcanizing, kurapa ... Read more
Categories FAQ, Technologies Tags waya kudziyisa induction, high frequency cable hita, high frequency waya kudziyisa, induction cable hita, induction cable kudziyisa, induction wire uye cable kupisa, induction waya hita, induction waya kupisa, induction waya kupisa system, waya kudziyisa induction
Chii chinonzi induction kurapa? Ko induction kurapa inoshanda sei? Zvichitaurwa zviri nyore, simba remutsetse rinoshandurwa kuita rinochinjanisa razvino uye rinoendeswa kune coil yebasa iyo inogadzira munda wemagetsi mukati mecoil. Chidimbu chine epoxy pairi chinogona kunge chiri simbi kana semiconductor senge kabhoni kana graphite. Kurapa epoxy pane asiri-conductive substrates… Read more
Categories FAQ, Technologies Tags high frequency kurapa, high frequency kurapa system, induction healing, induction kuporesa application, induction kuporesa hita, induction curing heat, induction kuporesa muchina, induction kurapa system, chii chinonzi induction kurapa
Chii chinonzi kupisa kupisa kurapa pamusoro pechinhu? Induction kudziyisa inzira yekurapa kupisa iyo inobvumidza yakanyanya kutonhora kudziyisa kwesimbi nemagetsi emagetsi induction. Maitiro acho anovimba nemasaisai emagetsi emagetsi mukati mezvinhu kuti abudise kupisa uye ndiyo nzira inosarudzika inoshandiswa kusunga, kuomesa kana kupfava simbi kana zvimwe zvinhu zvinoitisa. In modern… Read more
Categories FAQ, Technologies Tags kupisa kurapa, kupisa kurapa induction, kupisa kurapa sevhisi, kupisa kurapwa, kupisa kupisa, HF kupisa kurapa, yakakwira frequency kupisa kurapa, yakakwira frequency kupisa kurapwa, intion heat heat treatment, induction kupisa kurapa maitiro, kupisa kwepamusoro kurapa, pamusoro kupisa kupisa
Induction Kuomesa Kumusoro Maitiro Maapplication Chii chinonzi induction kuomesa? Induction kuomesa inzira yekurapa kwekupisa umo simbi chikamu chine yakakwana kabhoni zvemukati inopisa mukati meye induction munda uye ndokukurumidza kutonhora. Izvi zvinowedzera zvese kuomarara uye brittleness yechikamu. Induction kudziyisa kunoita kuti iwe uve nenzvimbo kudziyisa kune… Read more
Categories FAQ, Technologies Tags tenga induction yekuomesa muchina, kuomesa, kuomesa induction, kuoma pamusoro, kuomesa kwepasi maitiro, induction hardening heat, induction hardening machine, induction kuomesa muchina mutengo, induction kuomesa mutengo, induction kuomesa maitiro, Induction kuomesa pamusoro, induction kuomesa system, chii chinonzi induction kuomesa
Induction Brazing Basics yekubatanidza mhangura, sirivha, kubata, simbi uye simbi isina tsvina, nezvimwewo.
Induction Brazing inoshandisa kupisa uye kuzadza simbi kujoina simbi. Kana yanyungudika, iyo yekuzadza inoyerera pakati peyakavhara-simbi simbi (zvidimbu zviri kubatanidzwa) ne capillary chiito. Iyo yekuzadza yakanyungudika inopindirana netete nhete yesimbi yesimbi kuti igadzire yakasimba, inodonhedza-proof mubatanidzwa. Mhando dzakasiyana dzekupisa dzinogona kushandiswa kubrasira: induction uye kuramba kudziisa, maovhoni, mavira, mwenje, nezvimwe. Kune nzira nhatu dzinojairika dzekusimbisa: capillary, notch uye kuumba. Induction brazing ine hanya chete neyekutanga yeiyi. Kuva nemukana wakakodzera pakati pesimbi yesimbi kwakakosha. Gaka-rakakura kwazvo rinogona kudzora simba re capillary uye rinotungamira kune asina kusimba majoini uye porosity. Kuwedzera kwekushisa kunoreva kuti mipata inofanirwa kuverengerwa simbi pakusunga, kwete nzvimbo, tembiricha. Optimum spacing yakajairwa 0.05 mm - 0.1 mm. Usati wasimbisa Brazing haina kunetseka. Asi mimwe mibvunzo inofanirwa kuongororwa - uye kupindurwa - kuitira kuti uve nechokwadi chekubudirira, kunodhura kujoina. Semuenzaniso: Akakodzera sei iwo esimbi simbi yekusimbisa; ndeipi yakanakisa coil dhizaini yakatarwa nguva uye zvemhando zvinodikanwa; iko kusungira kunofanirwa kuve kwemaoko kana otomatiki?
KuDAWEI Induction tinopindura izvi uye nezvimwe zvakakosha tisati taratidza mhinduro yebrazing. Tarisa pane flux Base simbi inowanzo fanirwa kuputirwa neyakagadziriswa inozivikanwa sekuyerera vasati vasungwa. Flux inosuka simbi yesimbi, inodzivirira oxidation nyowani, uye inonyorovesa nzvimbo yekushongedza isati yatanga. Izvo zvakakosha kushandisa yakakwana flux; Zvishoma uye kuyerera kunogona kuve
yakazara nemaoidhi uye inorasikirwa nekwanisi yekuchengetedza simbi dzesimbi. Flux haigare ichidikanwa. Phosphorus-inotakura zadza
inogona kushandiswa kusimbisa maalloys emhangura, ndarira uye ndarira. Flux-yemahara brazing zvakare inogoneka neanoshanda emuchadenga uye vacuums, asi iyo brazing inofanira kubva yaitwa mune inodzorwa mhepo kamuri. Flux inowanzo fanirwa kubviswa pachikamu kana iyo simbi yekuzadza yasimba. Nzira dzakasiyana dzekubvisa dzinoshandiswa, yakanyanya kuve kudzima mvura, kunhonga uye kukwesha waya.
Categories FAQ Tags high frequency brazing, igbt induction brazing, Induction Brazing Basics, induction brazing heater, chirevo chekudzidzira kuburitsa, dzidziso yekusungurudza
Sei uchisarudza Induction Brazing?
Induction kudziyisa tekinoroji iri kudzikamisa kudzima yakavhurika marimi uye ovhiri senge yakasarudzika kupisa sosi mune brazing. Zvikonzero zvinomwe zvakakosha zvinotsanangura uku kukura kuri kukura:
Induction kudziyisa kunoendesa simba rakawanda pasikweya millimeter pane irwo murazvo wakashama. Taura zvakapusa, kuburitswa kunogona kusimbisa zvimwe zvikamu paawa pane mamwe maitiro.
2. Kurumidza kupfurikidza
Induction yakanaka kune-mutsara kubatanidzwa. Mabatch ezvikamu haachafanirwe kutorwa padivi kana kutumirwa kunosungira. Zvemagetsi zvinodzora uye zvakagadziriswa maoil ngatibatanidze iyo yekushongedza kuita isina musono yekugadzira maitiro.
3. Kubatana kushanda
Induction kupisa inodzora uye inodzokororwa. Pinda yako yaunoda maitiro maparamende mune iyo induction michina, uye ichadzokorora kupisa matunhu ane chete asina basa kutsauka.
4. Unique controllability
Induction inoita kuti vashandisi vaone iyo brazing maitiro, chimwe chinhu chakaoma nemirazvo. Uku uye kupisa chaiko kunodzora njodzi yekupisa, izvo zvinokonzeresa majoini asina kusimba.
5. Zvimwe zvinobudirira zvakatipoteredza
Vhura mirazvo inogadzira nharaunda dzisina kugadzikana dzekushanda. Maitiro emushandi uye kugadzirwa zvinotambura semhedzisiro. Induction yakanyarara. Uye hapana zviripo kuwedzera kwekushisa kwakatenderedza.
6. Isa nzvimbo yako kushanda
DAWEI Induction brazing michina ine diki tsoka. Induction zviteshi zvinotsvedza zviri nyore mumasero ekugadzira uye marongero aripo. Uye yedu compact, nharembozha masisitimu anorega iwe ushande pane zvakaoma-kuwana-zvikamu.
Induction inogadzira kupisa mukati meesimbi simbi - uye hakuna kumwe kunhu. Iyo isiri-yekubata maitiro; simbi dzesimbi hadzina kumbosangana nemirazvo. Izvi zvinodzivirira simbi dzesimbi kubva pakurukwa, izvo zvinobva zvawedzera goho uye mhando yechigadzirwa.
Categories FAQ Tags ruzivo rwekuiswa muchikwata, kusungurudzika, high frequency induction brazing, igbt induction brazing, RF kutengesa kushandiswa, Chikonzero nei brazing ari nani, Sei uchisarudza Induction Brazing?
Chii chinonzi induction annealing?
Maitiro aya anopisa simbi iyo yatove nekugadziriswa kukuru. Induction annealing inoderedza kuomarara, inovandudza ductility uye inoderedza kushungurudzika kwemukati. Kuzara-kwemuviri kubatira chiito apo iro rakazara basa rekushongedza rakawedzeredzwa. Iine seam annealing (inonyatso kuzivikanwa se seam normalizing), inongori nzvimbo inokanganisa kupisa-inogadzirwa neyakagadziriswa maitiro.
Induction annealing uye normalizing inounza nekukurumidza, kunovimbika uye kwenzvimbo kupisa, chaiyo tembiricha kudzora, uye nyore mu-mutsara kubatanidzwa. Induction inobata yega yega workpieces kune chaiwo maratidziro, neanodzora masisitimu anoramba achiongorora nekurekodha maitiro ese.
Induction annealing uye normalizing inoshandiswa zvakanyanya muhubhu nepombi indasitiri. Inowedzerawo waya, zvidimbu zvesimbi, mashizha ebanga uye machubhu emhangura. Muchokwadi, kuburitswa kwakaringana kune chero basa rekuwedzera.
Ndeipi midziyo iripo?
Imwe neimwe DAWEI Induction annealing system inovakwa kuti igutse zvakatarwa zvinodiwa. Pamwoyo pesisitimu yega yega iri
iyo DAWEI Induction Heating jenareta iyo inoratidzira otomatiki mutoro unoenderana uye inogara iine simba chinhu pamatanho ese emagetsi. Mazhinji emasisitimu edu akaunzwa zvakare ane tsika-yakavakirwa kubata uye kutonga mhinduro.
Categories FAQ Tags annealing, high frequency annealing, high frequency annealing surface, induction annealing, induction annealing tube, Chii chinonzi induction annealing?
Chii chinonzi kutengesa induction?
Neye induction welding iyo magetsi inogadzirwa nemagetsi mune yebasa. Iko kumhanya uye kurongeka
ye induction welding inoita kuti ive yakanakira kumucheto Welding yemachubhu nemapombi. Mukuita uku, mapaipi anodarika induction coil nekumhanya kwazvo. Sezvavanodaro, iwo mativi anopisa uye anosvinwa pamwechete kuti vagadzire iyo yakareba longitudinal weld seam. Induction Welding inonyanya kukodzera kune yakakwira-vhoriyamu kugadzirwa. Induction welders inogona zvakare kugadzirwa nemisoro yekubata, ichivashandura kuva
zvinangwa zviviri kutengesa zvirongwa.
Automated induction longitudinal welding ndeye yakavimbika, yakakwira-kuburitsa maitiro. Iko kushomeka kwesimba kwesimba uye kushanda kwakanyanya kweDAWEI Induction kutungidza masisitimu anoderedza mutengo. Kudzora kwavo uye kudzokorora kunodzora zvimedu. Masystem edu anoshanduka-otomatiki mutoro unoenderana unoona izere nesimba rekuburitsa pamhando dzakasiyana dzehukuru hwehubhu. Uye tsoka dzawo diki dzinovaita kuti zvive nyore kusanganisa kana kudzoreredza mumitsara yekugadzira.
Induction Welding inoshandiswa muhubhu uye pombi indasitiri yehurefu hwesimbi yesimbi isina waya (magineti uye isiri-magineti), aluminium, yakaderera-kabhoni uye yakasimba simba yakaderera-alloy (HSLA) simbi uye nezvimwe zvakawanda zvinoitisa.
Categories FAQ Tags high frequency welding, kutengesa kusungidzirwa, kutengesa kusungirirwa, radio frequency welding, kutengesa, welding copper tube, welding tubing
Chii chinonzi induction bonding?
Induction bonding inoshandisa induction kudziyisa kurapa kubatanidza zvinonamatira. Induction ndiyo nzira huru yekurapa zvinonamatira uye zvisimbiso zvezvinhu zvemotokari senge masuo, hoods, fenders, magirazi ekuona kumashure nemagineti. Induction inoporesa zvakare zvinonamatira mune zvinoumbwa- kune-simbi uye kabhoni fiber-kune-kabhoni fiber mafundo. Kune maviri akakosha mhando dzekubatanidza mota: spotbonding,
iyo inopisa zvikamu zvidiki zvezvinhu zvekubatanidzwa; yakazara-mhete yekubatanidza, iyo inopisa zvakakwana majoini.
DAWEI Induction nzvimbo yekubatanidza masisitimu inovimbisa chaiyo magetsi ekuisa kune yega yega pani. Nzvimbo diki dzinopisa dzakakanganiswa dzinodzora kureba kwepaneru. Clamping haina kudikanwa kana uchibatanidza simbi mapaneru, ayo anoderedza kushungurudzika uye kukanganisa. Panhivi rega rega rinotariswa nemagetsi kuona kuti kutsauka kwesimba rekuisa kuri mukati memashiviriro. Iine yakazara-mhete yekubatanidza, imwe-saizi size-
coil yose inoderedza kudikanwa kwemakumbo epasi.
Induction ndiyo nzira inosarudzika yekubatanidza muindasitiri yemotokari. Inoshandiswa zvakanyanya kusunga simbi uye aluminium sheet simbi, induction iri kuramba ichishandiswa kusunga chitsva chisina kuremerwa chinoumbwa uye kabhoni fiber zvinhu. Induction inoshandiswa kusunga tambo dzakakombama, bhureki shangu nemagineti muindasitiri ye electrotechnical.
Iyo inoshandiswawo kumagwara, njanji, masherufu uye mapaneru mune chena zvinhu chikamu.
DAWEI Induction inyanzvi induction kurapa nyanzvi. Muchokwadi, isu takagadzira induction nzvimbo ichirapa.
Iyo midziyo yatinounza masosi kubva kune yega system system senge magetsi masosi uye makoiri, kupedzisa uye nekutsigira zvizere mhinduro dzekuchinja-kiyi.
Categories FAQ Tags bonding, high frequency bonding heating, induction bonding, induction bonding heater, induction bonding process, RF kusunga nzira